काठमाडौंका ४२ स्थानमा फ्रि-वाइफाई जडान ! - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंका ४२ स्थानमा फ्रि-वाइफाई जडान !
काठमाडौं, भदौ १६ । स्वदेशी र बिदेशी पर्यटकलार्इ लक्षित गरि काठमाडौं महानगरपालिकाले राजधानीका ४२ स्थानमा फ्रि-वाइफाई जडान गरेको छ । यहाँका चार पर्यटकिय र चार पार्क गरी ४२ स्थानमा वाईफाई जडान गरिएको महानगरपालिकाका निजी साझेदार कार्यक्रमका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस पाँच लाख नगदसहित १३ जुवाडे पक्राउ
ट्याग्स: free wifi, kathamandu